Ihe mere ị na-aga sauna ji dị mma - sauna maka ndị na-amalite
Sauna - ezumike na ọdịmma
Atụmatụ maka njem nleta mbụ
Kedu usoro usoro kachasị mma nke oge sauna?
Oge izu ike mgbe niile abụghị naanị maka ahụ ike gị, kamakwa ị ga-ezuru onwe gị. Ọ bụghị n'efu ka nnyocha e mere gosiri na e nwere ihe dịka nde mmadụ 5 na 2 nde saunas na Finland. Na Germany kwa, ọtụtụ ndị ọzọ na-aṅụ iyi site na ọtụtụ mmetụta ahụ ike na ahụike, anụ ahụ na uche.
Gịnị mere o ji baa uru ịga sauna?
Karịsịa n'oge oyi, ọ bụ ihe ezi uche dị na ịnweta sauna mgbe niile. Site na sauna, a na-eme ka akụkụ ahụ dum na usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ sikwuo ike, nke nwere ike ọ gaghị emetụta ọrịa ọrịa.
Gaa na sauna
Maka ndị mmadụ na-ata ahụhụ site na nhụjuanya ma ọ bụ nrụgide ọzọ, a na-atụ aro ka ị gaa sauna. Maka nsonaazụ kachasị mma, ihe mgbu nke ọrịa kwesịrị ịdaba n'afọ ya n'oge ka ukwuu, ka ọkụ si na blanketị sauna na-apụta ìhè na azụ. Nke a abughi nani na eme ka uru di na azụ, kamakwa nkpuru obi. Otú ọ dị, ọ dịghị mkpa ịgha ụgha ebe a mgbe niile, kamakwa ịnọdụ ala n'etiti iji mee ka mgbasa ahụ nọgide. Nsogbu Rheumatic nwekwara ike ibelata site na nleta sauna mgbe niile.
Maka ụfọdụ ọrịa anụahụ, dị ka ihe otutu, a ga-ahazi izu sauna kwa izu. Ọkụ ahụ na-eji nwayọọ nwayọọ na-ebute akpụkpọ anụ ahụ nke na-ejikarị sebum. Nke a gbaghaara usoro ọgwụgwọ a otutu.
A na-atụ aro ka a saa mbara ọ bụghị nanị maka mmetụta ya n'ahụ ahụ, kamakwa maka mgbake echiche. Ọtụtụ ndị na-arịwanye elu na nhụjuanya na nrụgide, nke abụọ nwere ike ịkụda nke ọma site n'ịga sauna. A na-atụ aro nleta sauna maka nsogbu ụra, dị ka ịṅụ iyi na-agba ume ike ọgwụgwụ, nke na-eduga n'ịrahụ ụra ngwa ngwa na ịmalite ụbọchị ahụ nke ọma n'ụtụtụ.
Ekele nke sauna nwere mmetụta dị mma n'ahụ onye ahụ dum. Ọkụ nke na-egbuke egbuke na-esi n'ime akpụkpọ ahụ na-abanye n'ime ahụ ya ma na ahụ ọkụ nke ahụ dị elu ruo 3 Celsius. Site na usoro a, ihe niile a na-eme na-emewanyewanye, a na-eme ka mgbasa ahụ na-amụba, a na-ewusi mgbidi ahụ ike.
• Ọ dị mkpa iburu n'uche tupu njem ọ bụla na sauna na sauna na ọsọsọ adịghị adaba. Maka oge nleta ọ bụla ị ga-ezute oge zuru ezu ka a ga-eme atụmatụ iji zuo ike ma gbakee n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
• Naanị akwa bat na akpụkpọ ụkwụ kwesịrị ịba na sauna. A ga-ewepụ ihe niile eji eme ya tupu oge eruo, n'ihi na ha na-ere ọkụ ma nwee ike ịkpata mmerụ ahụ. Ọ ka mma ịhapụ iko ndị dị n'èzí ma daa azụ na anya mpempe ntị, n'ihi na ihe enyemaka ahụ ga-eme ka mmiri na-efe ozugbo.
• O yikarịrị ka a ga-ezere ị na-agụ nri na sauna ma ọ bụ na-eri nri n'ihu ọhụụ, n'ihi na nke a abụghị ezigbo maka mgbasa. N'otu aka ahụ, ịṅụ mmanya na-aba n'anya ekwesịghị ịṅụ mmanya n'oge a na-edebe sauna.
• Ndị na-esi na saa ọkụ dị ọkụ ekwesịghị ịdaba na mmiri igwu mmiri, ma jiri nwayọọ nwayọọ kwụsịrị na mmiri wee malite igwu mmiri.
• Ná nkezi, 1 na 2 lita nke mmiri ahụ na-efu mgbe ị na-ewere sauna, nke a ga-eweghachiri ahụ ya ozugbo ngwa ngwa. Nke a kacha mma maka mmiri ịnweta mmiri.
Tupu ịbanye na saaji ahụ, a ga-asacha ya nke ọma iji kpochapụ ahụ ọ bụla ọsụsọ. Mgbe ahụ kpoo nke ọma, nke mere na mmiri mmiri ahụ adịghị emetụta ọsụsọ na sauna.
Ọgwụgwụ nke sauna
Ná mmalite, a ga-etinye akwa akwa akwa n'ime ime ụlọ sauna nke dị n'etiti ma ọ bụ nke kachasị elu, nke onye na-ahụ maka sauna nwere ike ịnọdụ ala ma ọ bụ dinara ala. Nleta nleta sauna kachasị mma bụ nke abụọ ma ọ bụ atọ nke sauna. Ahụ dị mkpa n'etiti oge 8 na 10 iji ruo okpomọkụ, ma ọ bụrụ na okpomọkụ anaghị eche iru ala, ọ ga - amaliterịrị ịmalite na mbụ.
Mgbe nke mbụ sauna, anyị na-akwado mmiri mmiri oyi ma ọ bụ mmiri oyi na-esochi ya na nke a na-ekpo ekuku na oge 20 oge izu ike. Iji chebe mgbasagharị n'oge mmiri oyi, a na-atụ aro ka ị na-ebute mmiri n'isi nkị ụkwụ aka nri, n'elu ụkwụ na ogwe aka, wee jiri aka ekpe gaa site na elu ruo na ala. N'ikpeazụ, a pụrụ ileta sauna ọzọ maka 12 na 15 nkeji.
N'ozuzu ọ ka mma ịnọ na sauna karịa ịdina ala. N'ihi nke a, ọ bụghị nanị na mgbasa ahụ na-adịwanye elu, mana pores na-emeghekwa nke ọma. Na nleta mbụ na sauna, ị kwesịrị ị na-eji ọdụ ụgbọ ala dị ala, ebe ọ bụ na ọ naghị ekpo ọkụ n'ebe ahụ.
Usoro nchikota oru Mma ntụrụndụ
Sauna - Ònye ka onye nlekọta sauna na-eletaghi ya